အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ခြံစည်းရိုးလေး လုံပါစေ
15 Responses to “ခြံစည်းရိုးလေး လုံပါစေ”
ကိုတချပ်ကသူ့ ဖက်ကဟာဆိုပြီးဇွတ်လုပ်နေလို့ ...။
အမရေ ဟိုအကြောင်းပြောတာလားဟင်? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို ရေးပုံမျိုးကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ် Adora အိမ်ကိုလဲလာလယ်ပါအုံးနော်
June 29, 2012 at 11:13 AM
အဖြစ်သနစ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး တွေးစရာတွေပါလာတယ်
“သေချာခိုင်မာတဲ့ ခြံစည်းရိုးကာလိုက်ပြီးတော့မှပဲ ကျွန်မတို့ခြံမြေကို တစ်တိတိဖဲ့ယူနေတဲ့ အိမ်နီးချင်းဟာ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး” တဲ့လား မမ ... စာသားလေးတွေက ရင်ကိုတည့်တည်ထိတယ် မမရေ ... :)
အဲ့လို အဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးတယ်မမ....
ပညာပေးရော အတွေးလေးပါ ရစေတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါမမရေ..
တို့အားလုံးရဲ့ အိမ်က ခြံစည်းရိုးမရှိတာ မဟုတ်ဘူး..
စည်းရိုးကို ခြစားလို့ မလုံတော့တာ...:(
မိသားစု မှာရှိသင့်တဲ့ ခြံစည်းရိုးလေးပါ
Moe Sett Pwint said...
Likealot, these problematic population rapidly increased like your neighbour's bamboos :)))
ကိုယ့်ခြံကမှ မလုံတာ သူခိုးက ဝင်တော့မှာပေါ့။ ဒီတော့ သူခိုးမဝင်စေချင်ရင် ခြံကို လုံအောင် ကာဖို့ဘဲ ရှိတယ်---
June 29, 2012 at 11:15 PM
ဆေးသမားတွေ ကြောက်ရတယ် ချောရယ်...
June 30, 2012 at 7:16 PM
reflected. related. re-think-back.
GREAT POST ma chaw. :)
June 30, 2012 at 8:36 PM
တော်တော်ဆိုးခဲ့ကြတဲ့ ခြတွေ။ ၀ါးခြံစည်းရိုးတင်မကဘူး၊ အုတ်တို့ သံတို့နဲ့ ကာထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးကိုလဲ စားပစ်နိုင်စွမ်းရှိလောက်တယ်။
June 30, 2012 at 9:41 PM
တက္ကသိုလ် အလင်းအိမ်(တေဇာလင်း) said...
June 30, 2012 at 10:01 PM
အင်း...ရေးသွားတဲ့ အရေးသားလေးက ကောင်းသလို...အဲဒိနောက်က တစ်ကယ့်ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုလည်း မြင်လိုက်တယ်..ကိုယ့်စည်းရိုးကိုယ် လုံအောင်ကာ.......
July 1, 2012 at 4:29 PM
ဆိုလိုရင်းကို တကယ်သဘောပေါက်သွားပါတယ်... မချောရေ.... Good Message လေးပါ..း))